Abwaan Axmed Farah Idaajaa - Hoygamaansada
oo ku magac-dheer “Idaajaa” waxuu ka mid yahay Suugaanyahannada ugu waaweyn Somaalida. Waxuu aaad ugu xeel dheeryahay dhaqanka iyo taariikhda suugaanta Soomaalida. Waqti badan waxuu galiyay uruurinta iyo daabacaadda Gabayada Soomaalida. Waxqabadkiisa waxaa ka mid ah uruurinta Gabayadii Abwaan Ismaaciil Mire Cilmi oo ka mid ahaa Janaraalladii Darawiishta. Waxaa la daabacay sanadkii 1974. Dagaalkii Sookeeye kadib, waxuu usoo wareegay Yurub halkaasuu kasii waday qoridda iyo ka shaqeynta Suugaanta Soomaalida. Abwaan Idaajaa waxuu soo jeedin jiray barnaamijka Fanka iyo Suugaanta ee ka bixi jiray Idaacadda BBC-da laanteeda Af-Somaaliga. Haddase waxuu soo jeediyaa taxanaha caanka ah ee Hiddaha iyo Dhaqanka ee ka baxa idaacadda VOA laanteeda Af-Soomaaliga. Waxuu ku dhashay gobolka Mudug sandkii 1948.
Abwaan Axmed Farah Idaajaa war dheeri ah
Soomaalida iyo maansadeeda: Taariikh kooban
Waxay Soomaalidu ahayd, welina tahay Ummad aad u muuneysa aftahammada guud ahaan, gaar ahaanna maansada. Qoristii Afsoomaaliga ka horna, waxay maansadu ula meel joogtey buug-taariikheed ay ka ogaadaan waayihii ay soo mareen iyo dhacdooyinkii waaweynaa ee noloshooda si taban amaba togan u saameeyey. Soomaalidii reer-miyiga ahayd markay dagaallo dhex-maraan, gabyaaga qabiilka ayaa tirin jirey maanso